Degmada Jalalaqsi Oo Laga Hirgaliyay Leeyrarka Ku Shaqeeya Cad-Ceeda “Sawirro” – Radio Muqdisho
Degmada Jalalaqsi Oo Laga Hirgaliyay Leeyrarka Ku Shaqeeya Cad-Ceeda “Sawirro”
Magaalada Jalalaqsi waxa ay ka mid tahay Degmooyinka gobolka Hiiraan ee sanad ka hor laga xoreeyay argagaxisada Al Shabaab, waa degmo istiraatiiji ah oo uu maro webiga Shabeele caana ku ah beera iyo dhul daaqsimeed, waxaana ay eheyd meel ay cuuryaamiyeen UGUS, inkastoo hadda ay soo laabanayaan adeegyadii bulshada islamarkaana ay ka soo kabaneyso daqaradii Cadowgu uu u geystay.
Magaalada waxaa hadda laga dareemayaa horumaro kale duwan oo u horseeday maamulka Dowladda ee degmada Jalalaqsi, waxaana magaalada laga hirgaliyay leerarka ku shaqeeya cad ceeda magaaladuna ay tahay mid mugdigii ka baxday oo xiliyada habeenkii bulshadu ay tahay mid qabsada howlahooda caadiga ah.
Maamulka Degmada Jalalaqsi ayaa ka hirgaliyay leerarkaasi, taasi oo qeyb ka ah horumarinta hanaanka magaalo iyo bilic soo celineed, iyadoo qeybaha kale duwan ee magaaladaasi ay soo dhaweeyeen horumarada kale duwan oo ay gacanta ka geysanayso Dowladda Soomaaliya.
Dhinaca kale magaalada waxaa ka socda barnaamijyo lagu xoojinayo is dhex galka Bulshada, iyadoo bulshada ay qeyb ka qaadanayaan xoojinta amniga,nadaafada,isku xirnaanta dowladda, iyo shacabka, waxaana maamulka uu dib u dhis uu ku sameeyay xafiisyada uu ku shaqeeyo maamulka, suuq laga hirgaliyay oo bulshada loogu adeego, iyo garoon kubada cagta ah lagu ciyaaro.
Maamulka gobolka Hiiraan ayaa marar kale duwan ku cel celiyay in ay ka go’antahay deegaanada gobolka gaarsiinta adeegyada muhiimka u ah bulshada, waxaana hadda soconaya abaabulka leerar cad ceeda ku shaqeeya oo la doonayo in laga hirgaliyo magaalada Bulaburde.
Ciidanka XDS oo si buuxda ula wareegay tuulada Wabxo
Roobabkii Saacadihii la soo dhaafay ka da, ay Muqdisho oo waddooyinka qaar biyo dhigay